Himalaya Dainik » बिष्णु माझीको भूमिगत जीवन ‘रहर कि बाध्यता’ ?
बिष्णु माझीको भूमिगत जीवन ‘रहर कि बाध्यता’ ?
विष्णु माझी र कुलेन्द्र विश्वकर्माले गाएको लोकदोहोरी गीत सालको पात टपरी नहुनी सल्लैको अहिले नेपाली संगीतप्रेमीको जिब्रोमै झुण्डिएको छ । यूट्युवमा सम्भवतः अहिलेसम्मकै सर्वाधिक भ्युज पाएको लोकदोहारी हो यो ।
गीतले डेढ करोड भ्युज कटाएपछि केही दिनअघि ‘सेलिब्रेसन’ कार्यक्रम गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा गीतसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष गाँसिएका सबै उपस्थित थिए, तर गायिका विष्णु माझी भने थिईनन्
झण्डै डेढ दशकदेखि लोक गायनमा सक्रिय यी प्रख्यात गायिका आजसम्म एकपटक पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी छैनन् ।
अहिले एक–दुईवटा गीत हिट हुनासाथ गायक–गायिकाहरुलाई स्वदेश तथा विदेशका कार्यक्रमहरुमा निम्तो आउन थाल्छन् । चलेका गायक–गायिकाहरुका लागि त विदेश यात्रा पानी पँधेरो धाएजत्तिकै हुन्छ । यस हिसाबले सयौं हिट गीत दिएकी विष्णु पनि देश–विदेशका कार्यक्रममा व्यस्त रहनुपर्ने हो । तर, उनले अहिलेसम्म विदेशमा पाइला पनि टेकेकी छै्रनन् । स्वदेशकै मेला–महोत्सवमा पनि उनी पुग्दिनन् । जब कि उनको सबैतिर चर्को डिमान्ड छ ।
२५ सय मात्र पारिश्रमिक लिने उनी धेरैको रोजाइमा पर्न थालिन् । धेरैतिरबाट कार्यक्रमका लागि अफरहरु आउन थाले । तर, गीत रेकर्डिङका लागि स्टुडियो जानेबाहेक विष्णु कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा गाउन गइनन् । ०६४ सालसम्म उनी चर्चाको शिखरमा पुगिसकेकी थिइन् । उनी दैनिक ५–६ वटा गीतमा स्वर भर्न भ्याउँथिन् । उनीसँग काम गर्न चाहनेले सुन्दरमणिमार्फत डिल गर्नुपथ्र्यो/पर्छ ।
हल्ला यस्तो पनि चल्यो कि सुन्दरमणिले विष्णुलाई अविवाहित अवस्थामै बन्धक जसरी घरभित्रै थुनेर राखेका छन् र उनैले विष्णुलाई सामाजिक सञ्जाल÷मोबाइलबाट टाढा राखेका हुन् । यस्तो चर्चामा आजसम्म न सुन्दरमणिले कुनै सफाइ दिएका छन् न विष्णुले ।
पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सुन्दरमणि सम्पर्कमा आएनन् ।
(हामीले यो रिपोर्ट अनलाईनखबरको सहयोगमा तयार पारेका हौ)